FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA AMIN'NY ALIKA - ALIKA
Chihuahua / Pekingese Mix Dogs
'Tinker Bell ity. Izy dia mifangaro eo amin'ny Pekingese (reniny) sy Chihuahua (rainy). Miantso azy hoe Peke-huahua izahay sy ny zanako vavy. 4 volana izy amin'ity sary ity ary tena mahatoky, marani-tsaina ary tsara fanahy. Alika be filalaovana izy ary mahay manao zavatra tsara amin'ny ankizy raha toa ka manomboka mihoa-pefy izy, ny sisa holazaiko dia Tink dia ampy izay ary hijanona izy. Tiany ny mandeha mandeha miaraka aminay ary manao fanatanjahan-tena be dia be izy. Alika tena tsara izy rehetra. Tsy mbola tia biby hafa toy ny Tinker Bell aho. '
Ny alika dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Chihuahua ary ny Pekingese . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
American Canine Hybrid Club = takolaka
Designer Dogs Kennel Club = takolaka
Mpanoratra International Canine Registry®= Pekachi
Drafitra mpamorona endrika = takolaka
'Scooter dia Pekachi roa taona. Alika mpamonjy izay natsangako ho zanany enim-bolana. Scooter dia milalao ary hendry tokoa. Manana namana maro izy, na ny alika na ny olona. Tsy mbola nahita kilalao mikiakiaka tsy tiany izy. Rehefa Puppy izy dia nopotsehiny izy ireo mandra-pialany torimaso ary avy eo nifoha tamin'ny torotoro. Tena tongolo-tsoroka izy fa tsy nahasakana azy izany mandeha lavitra isan'andro na mihazakazaka manodidina ny tokontany miaraka amin'ireo sakaizany. Tianay ny fo ataon'ny Scooter amin'ny tongony eo alohany! Ny Scooter dia tsy mbola nifaneraserana tamin'ny fotoana nanaovako azy. Nentiko tany Ahimsa asabotsy nilalao alika kely ho an'ny alika kely izy (misy mpampiofana isaky ny daty filalaovana, izay tena nanampy tamin'ny fianaran'i Scooter hifanerasera) ary taorian'ny telo herinandro teo ho eo ny Scooter dia natahotra ny zava-drehetra sy ny rehetra ary nibolisatra ny alika rehetra, nanapa-kevitra ny Scooter fa mety hahafinaritra kokoa ny milalao amin'ireo doggies rehetra. Mbola mandeha milalao daty isaky ny asabotsy izahay ary ny Scooter no Masoivoho ankehitriny miarahaba ireo doggie vaovao rehetra tonga. Tena malala tokoa izy! '
Punkie io. Pekingese / Chihuahua (takolaka) izy.
Bubba the Cheeks amin'ny faha-6 volana izao. Hoy ny tompony: Izy no Star ao an-trano, mampiala voly antsika foana izy. Tena mamy sy milalao izy. Tena tianay izy. '
Bubba the Cheeks amin'ny faha-6 volana
I Franklin the Cheeks dia mampifangaro alika kely amin'ny 20 herinandro— 'Franklin dia zazalahy mamy tokoa. Tiany ny milalao ary mahafinaritra miaraka amin'ny olona sy ny ankizy. '
Dagny the Cheeks amin'ny 1½ taona no nanao akanjo mavokely fuzzy
Zazalahy kely Beau the Cheeks amin'ny 10 herinandro - fotsy ny rainy Chihuahua ary angady ny reniny Pekingese .
Niaina 15½ taona i Brandy Doggie Dog. Nodimandry izy tamin'ny Mey 2003.
Ilay zaza ao an-trano, Trooper Victor Duverge amin'ny faha-7 volana. Mpangaro Pekingese / Chihuahua izy.
Ity cutie kely ity dia antsoina hoe Lizzy. Lizzy dia 6 volana, 7-lb. Fangaro Chihuahua / Pekingese. 'Manana hery be dia be izy ary be fitiavana. Nandia fiofanana ho an'ny alika kely izy ary 'hipetraka', 'hihozongozona' ary 'hidina' rehefa baikoina (raha salama saina izy). Manana ny sain'ny azy ny sofiny. Hijoro mahitsy izy ireo (Chihuahua) mandritra ny herinandro na roa, avy eo dia hianjera izy ireo, toy ny amin'ny sary, amin'ny herinandro manaraka. Toy izany daholo ny momba azy. Tena manana ny azy manokana izy. '
Hijery ohatra hafa momba ny takolaka
Sarin'ny takolaka 1
alika malaza indrindra tamin'ny 2015
mainty sy fotsy hareza sisin'ny pitbull
Malagasy bulldog Jack Russell Mix
alika lahy roa ve afaka mifanaraka